Wednesday April 01, 2020 - 13:28:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Bayaan kasoo baxay hoggaanka guud ee Urur weynaha Al Qaacidda ayaa looga hadlay cudurka laayaanka ah ee Carona Virus kaasi oo halistiisu ay camimtay bani'aadamka adduunka kunool.
Al Qaacidda waxay dadka muslimiinta ugu baaqday in ay towbadkeenka badiyaan ayna ogaadaan in musiibo walba oo dhacda ay ku timid wax insaanku gacmihiisa ku sameystay loona baahanyahay in rabbi loo laabto.
Bayaanka ayaa lagu sheegay in waxa maanta caalamka ka socda ay lamid yihiin in Bani'aadamku uu ku dhax jiro calool Nibiri waxa kaliya ee looga bixi karana ay tahay in Alle SWT rabbinimadiisa loo kali yeelo.
Hoggaanka Al Qaacidda ayaa shucuubta wadamada reergalbeedka oo ah kuwa ugu daran ee guranaya miraha xumaantii ay abuurteen ugu baaqday in ay islaamka soo galaan ayna ka baxaan mugdiga iyo xumaanta ay dhax muquuranayaan.
Halaagga safmareenka ah ee Carona uu ugeysanayo reergalbeedka iyo burburka dhaqaale ee aan tirakoobka laheyn ayaa gaalada ugu filan in ay ku cibraqaataan awoodda Alle ayna diinta islaamka soo galaan.
"bal fiiriya saameynta burburka dhaqaale ee uu geysanayo caabuqan dilaaga ah oo sababtiisa asaasiga ah tahay Ribada oo ah wax alle lagula dagaallamayo, bayaanka ayaa si qota dheer loogusoo qaatay dulmiga iyo gardarrada ah uu reergalbeedku kula kacaya muslimiinta ducafada ah waxaas oo idilna ay kamid yihiin waxa soo dadajiyay ciqaabta maanta ku dhacaysa.
Dadka muslimiinta ee caalamka ku dhaqan ayaa loogu baaqay in ay isku naxariistaan ayna quudiyaan fuqarada iyo dadka masaakiinta ah acmaashaas oo keeni karta in Alle umadda ka dulqaado aafooyinka halista ah oo Carona Virus uu ka mid yahay.
Caabuqa Carona Virus oo dad badan ku laayay dalka Yemen.
Dhimashada Carona ee Mareykanka oo 100 kun ku dhow.